Nhau - Musangano wemarori echikafu wakauya kuChesterfield Shopping Center muna Mbudzi ukabhuka vatengesi makumi matatu nevatanhatu
Ibwe reBritish.Louis-Nguva ino yechando, musangano mukuru werori dzechikafu pasi rose uchaita musangano wemarori ezvekudya muChesterfield.
Zvinoenderana nepeji yechiitiko cheFacebook, Generation Entertainment Florida pamwe nerally yakakura kwazvo yerori yechikafu uye mamwe makambani matatu achaita chiitiko cherori yechikafu paChesterfield Mall kubva 11 am kusvika 11 pm neMugovera, Mbudzi 13th.
Kusvika pari zvino, kuwedzera kumakambani e9, vanenge makumi maviri nevanomwe vatengesi vezvokudya nezvinwiwa vakarongerwa.Kupinzwa mahara.
Muna Kurume 2021, Generation Chikafu Truck (USA) yakahwina Guinness World Record neyakakura kwazvo rori yechikafu parade yemotokari zana nemakumi maviri neimwe yakaitirwa kuFlorida Exhibition Center.
Ibwe reBritish.Louis-The doctoral school yakazivisa neChishanu manheru kuti Belma E. Givens, mudzimai wemushakabvu Harrisstow State University Mutungamiriri Dr. Henry Givens, akanga ashaya.
Ibwe reBritish.Louis County, Missouri-St.Louis County Acting Chief Mapurisa Kenneth Gregory haasi kushaya ruzivo.Asi chiitiko chitsva ichi muhutungamiriri ndechimwe chakabvuma murume ane makore makumi matanhatu nemapfumbamwe ekuberekwa kuti achiri kujaira.
“Izvi zvinogona kungokura pandiri, zvinogona kundidzinga.Handisati ndaziva.Ndinofarira zvandiri kuita iye zvino.Ndinoziva kuti dhipatimendi iri rakandiomera, uye ndinotarisira kubata naro.Dambudziko," Gregory akadaro.